4 ဖြုတ် Chilling condiments ဆာဗာများနှင့်ရေခဲနေသော condiments ဆာဗာပေးသွင်းအတွက် 1
ရေခဲပြင်တွင်4ဖြုတ် Chilling condiments ဆာဗာအတွက် 1: အကြီးစား Clear ကို condiments ဆာဗာစည်းရုံးရေးမှူး4ကွန်တိန်နာများနှင့်အဖုံးနှင့်အတူရေခဲပြင်ပေါ် condiments, အသီးအနှံ, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, နာရီ Delicious လတ်ဆတ်အေးမြသော appetizers စောင့်ရှောက်ရန်ကြီးမြတ်။
သငျသညျနာရီအေးမြအစားအစာကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်လေးရယ်ရန်သင့်အစားအစာများကိုခံစားရန်လွယ်ကူသောနည်းလမ်းတစ်ခုရှာဖွေနေကြပြီလျှင်, ဤရေခဲ condiments server ကိုသင်တို့အဘို့စံပြပါ! သင်ပြုသမျှအားလုံးသည်ကိုင်ဆောင်ထားသူအတွက်နေရာအရပ်အအေးရေခဲနှင့်ပေါ်တွင်အခန်းနေရာ! ဒီ Chilling condiments ဆာဗာအိမ်မှာ ယူ. , နာရီအေးမြလတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာကိုခံစားမတိုင်မီ! အေးမြအပူချိန်အတွက်အစားအသောက်ထိန်းသိမ်းပိုမိုလွယ်ကူခဲ့ဘယ်တော့မှသိရသည်။
ဤသည်အံ့သြဖွယ်အအေးမျြးစိမျ့စိမျ့ condiments ဝတ်ပြုဗန်းမဆိုအခါသမယများအတွက်စုံလင်သောရွေးချယ်မှုပါ! ဒါဟာသင်အနေနဲ့မိုးလုံလေလုံဒါမှမဟုတ်ပြင်ပပါတီ, မင်္ဂလာဆောင်တစ်ဦးမိတ်ဆွေများက 'သို့မဟုတ်မိသားစုစုဝေးတစ်ပျော်ပွဲစားတစ်ခုသို့မဟုတ် barbecue.The Chilling condiments ဆာဗာသင်တို့အဘို့အသုံးဝင်သည်, ဒီထိပ်တန်းထစ်ဘူဖေးသို့မဟုတ်စားပွဲစီစဉ်ရှိမရှိတို့သည်ကြီးစွာသောအအေးရှင်းရှင်းလင်းလင်း condiments server ကိုစည်းရုံးရေးမှူးဖြစ်ပါတယ် ဆာဗာကိုသင်လတ်ဆတ်တဲ့အရာအားလုံးကိုစောင့်ရှောက်ဖို့လိုအပ်အတိအကျကဘာလဲ! ဌာနမှူး condiments, အသီးအနှံ, အသုပ်, dressings သည် / ဝက်အူချောင်း, ဟင်းသီးဟင်းရွက်, appetizers နှင့်ပိုပြီးအဘို့။
မာစတာစက္ဏူထူနှုန်း 8 PCs, စက္ဏူထူအရွယ်အစား 43.5 * 35 * 53cm ။
2.Four ဖြုတ် compartment
4 ဖြုတ် compartment:
4 ကောင်းတဲ့အရွယ်အစားဖြုတ်အခန်းကွဲပြားခြားနားသောဝက်အူချောင်း, dips, ကုန်တယ်အသီးအပွသို့မဟုတ် appetizers နေရာနိုင်ပြီး more.And နာရီလတ်ဆတ် & အေးမြစောင့်ရှောက်လော့။
သူတို့အနိမ့်အပြေးလည်းအဖြစ်လိုအပ်သောရေခဲ refill ကြသောအခါသင်တို့ကိုအလွယ်တကူသင့်ရဲ့ condiments refill နိုင်အောင်အခန်းဖြုတ်ဖြစ်ကြသည်။
နာရီအေးမြလတ်ဆတ်တဲ့အစားအစာကိုစောင့်ရှောက်ရန်ကွန်တိန်နာ၏အောက်ခြေတွင်ရေခဲ Layer ။ condiments, အသီးအနှံ, အသုပ်, dressings သည် / ဝက်အူချောင်းနဲ့ပိုပြီးအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။ သင့်ရဲ့ condiments သူတို့အနိမ့်အပြေးလည်းအဖြစ်လိုအပ်သောရေခဲ refill ကြသောအခါ။
hinge အဖုံးသင်ကမဆုံးရှုံးနိုင်အောင်, server ကိုမှပူးတွဲပါနှင့်သင်ဧည့်သည်များကသူတို့ပြား refill စဉ် condiments ဖျက်ဆီးစိုးရိမ်ရန်မလိုပါဒီတော့အဖုံးအအေးလေထဲတွင်ထောင်ချောက်မှပိတ်ဖြစ်ပါတယ်။
လှုပ်ရှားမှုအဖြစ်နှလုံးခုန်က The Chilling condiments ဆာဗာအခုတော့လှည်းရန် Add ကိုကလစ်နှိပ်ပါ!
အများအပြားအခါသမယများအတွက်အသုံးပြုပါ။ သငျသညျ, ကမ်းခြေမှာတစ်ဦးပြင်ပတွင် BBQ ရှိခြင်း picnicking သို့မဟုတ် tailgating နေတယ်ဆိုရင်သင်ကစင်ကြယ်သောသင်၏အစာကိုစောင့်ရှောက်ကူညီပေးသည်သောကျယ်ဝန်း hinged အဖုံးကိုချစ်ပါလိမ့်မယ်။ အဆိုပါ chic ရှင်းရှင်းလင်းလင်း PBA-အခမဲ့ acrylic ဒီဇိုင်းလှပသောသင့်ရဲ့မိုးလုံလေလုံပါတီများအဘို့မဆိုပုံစံမျိုးသို့ကိုက်ညီ။
သတိ:သငျသညျ4နာရီထက်ပိုရှည်များအတွက် condiments server ကိုအတွက်အက်ဆစ်အသီးအပွထားခဲ့ပါမ holder.Do အတွက်အအေးရေခဲထားပါတဲ့အခါမှာသတိထားပါ။
ထူးချွန်ထုတ်ကုန်။ အတိအကျဖော်ပြထားသကဲ့သို့။ အအေး condiments စောင့်ရှောက်။ ကောင်းပြီဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်, အသီးများနှင့်မိသားစုစုဝေးများအတွက်အအေး dips စောင့်ရှောက်ခြင်းအဘို့အပြီးပြည့်စုံသော။
ပြင်ပထမင်းစားခန်းအဘို့ကြီးသော! - သင့်ရဲ့ condiments အားလုံးအတှကျအခန်းတစ်ခန်း၏ပဒေသာအပြင်ဘက် dips များအတွက်ပါတီပြုလုပ်ရန်အသုံးပြုသည်။ ဧည့်သည်များနှင့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုကခစျြတဲ့!
ဂရိတ် condiments ဆာဗာ!
ဒီကိုခစျြ! ငါနှစ်ခုဝယ်နိုင်အောင်ရှိသမျှတို့ကိုငါ condiments များအတွက်အလုံအလောက်ရှိသည်မယ်လို့နှင့်ပြီးပြည့်စုံသောအလုပ်လုပ်ခဲ့! ဒါဟာအအေးအရာအားလုံးထားရှိမည်နှင့်တစ်ဦးချင်းစီသောက်သောခွက်ကိုတွေအများကြီးကိုက်ညီ!
ကောင်းသောအရည်အသွေးနှင့် functional ဖြစ်စေ။ dips များအတွက်အသုံးပြုရန်အတွက်တစ်မိသားစုပျော်ပွဲစားဘို့ဝယ်ကယ့်ဒဏ်ငွေအလုပ်လုပ်ခဲ့!
အရည်အသွေးတကယ်ကောင်းလှ၏။ ဒါဟာအလွန်ကြံ့ခိုင်ပဲ! ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်ကောင်းစွာအရာအားလုံးကိုလျှော်နိုင်ပါတယ်ဒါကြောင့်အခန်းထွက်လာကြိုက်တယ်။ အဆိုပါအခန်းကြီးမားပေမယ့်သေးငယ်တဲ့ပါတီအတွက်လုံလောက်သောအကောင်းမရှိကြပေ။ ငါတကယ်ကိုယ့်အပေါ်ကိုထပ်ကျော် refilling စောင့်ရှောက်ခြင်းနှင့်ရန်မလိုပါဒီတော့ကိုယ့်အောက်ဆုံးအပေါ်ရေခဲစာရေးထားနိုင်သည်ကိုကြိုက်တယ်။